Khabiirka Kala Duwan - Maxay Yihiin Shabakadda?
Maqnaanshaha xogta (ama duubista webka) waa farsamada gacanta barnaamij ama qalab ayaa soo saari doona macluumaadka faa'iidada leh ee boggaaga ama boggaaga si uu u isticmaali karo goobo, ujeedooyin kale. Dadka kala duwan, waxay u jajaban yihiin dhawaaqyada waxoogaa cabsigeliya, laakiin qalabkii burburay waxay samaynayaan tiro badan oo goobo ah maalin kasta waxayna kaa caawin karaan inaad qabsato xog faa'iido leh bogagga shabakadaha ee gaarka ah marnaba. Waxay qaadan doontaa dhowr ilbiriqsi oo keliya oo ah qalab duuban shabakadda si loo aqoonsado, loo aqoonsado, oo loo abaabulo bogagga shabakadda oo wax ka qabta macluumaadka weyn ee kaydka. Laakiin waxaa jira siyaabo gaar ah oo lagu hubsan karo in aad samayso isticmaalka ugu fiican ee qalabka adeegga shabakadda. Nidaamyadaan, waxaad ku xiri kartaa boggaga internetka, qoraallada, sawirrada, sawirrada, fiidiyeyaasha, xasuusta iyo joornaalada iyada oo aan wax dhibaato aheyn oo ay ku badbaadin karaan waxyaabahaas oo dhan qalabka kombuyuutarka si habboon.
Gawaarida soo socota goobta ama blogku waxay ka iman kartaa dhowr wado, sida gaadiidka tooska ah iyo kan organic , gaadiidka lacag bixinta, warbaahinta bulshada, gudbinta, iyo emails. Waxaa muhiim ah in la hagaajiyo waxqabadkaaga boggaaga SEO iyo in la yareeyo xaddiga soocida ee xadka. Marka aad boggaaga ku xoqdo qalab wax lagu duubo, waxaad awoodi doontaa inaad hubiso ama aad mariso feylasha micno u leh ganacsigaaga internetka..Habkan, waxaad awoodi doontaa inaad abaabusho waxyaabaha muhiimka ah ee hal meel ah iyo waxyaabo aan muhiim ahayn meel kale. Waxaa intaa dheer, waxay kaa caawin doontaa hagaajinta tamarta raadinta raadinta ee goobtaada sida maadada ay noqon doonto mid wax ku ool ah oo leh keywords keywords ah.
Dhamaan ganacsadaha waxay og yihiin in cilmi-baaristu ay qayb muhiim ah ka tahay guusha. Haddii aad dooneyso in aad furto, isbedesho ama aad balaariso ganacsigaaga, waa in aad samaysaa baaritaan suuq ah oo ku saabsan aaladaha ugu fiican ee shabakadda, inaad hubiso in aad qaban karto labadaba qiimo iyo mid aan qiimo lahayn sida shuruudaha macaamiishaada. Si kale haddii loo dhigo, waxaan dhihi karnaa xiriir wanaagsan oo ka dhexeeya cilmi-baarista suuqa iyo qalab wax-ku-ool ah oo shabakad ah oo labada dhinacba ka shaqeyn doona dhinac kobaca ganacsigaaga.
Sida cilmi-baarista suuqa, abuurista hogaaminta waa muhiim in la koro ganacsi internetka. Iyada oo kuxiran noocaaga, hoggaamiyeyaashu waxay ku siin karaan macluumaad aad u faa iidaysan iyo faahfaahinta xiriirka macaamiisha iman kara. Barnaamijyada kala duwan ee websaydhku waxay kaa caawin karaan inaad abaabusho content-kaaga oo aad heshid fikradda ah nooca hogaamin ee loo baahan yahay in la abuuro ganacsi guul leh oo miro leh internetka. Waa inaad doorbido inaad ka baxdo Yelp, TripAdvisor, Zomato, Google, Trustpilot, Amazon, Better Business Bureau iyo dib u eegis ganacsi kale. goobaha si aad u hesho fikrad ah in macaamiishaadu ay ku qanacsan yihiin alaabadaada iyo adeegyadaada ama haddii kale. Sidaa darteed, waa inaad u tagtaa goobaha warbaahinta bulshada oo raadi calaamadaha iyo alaabooyinka magacyada si ay u haystaan ​​fikrad ah nooca macluumaadka ay ku martay internetka. Dib-u-eegista udhaxeeya iyo qaabka ganacsiga xoqidda ayaa ku siin doona aragti ku saabsan sida loola socdo ganacsigaaga. Waxay sidoo kale ku siin doontaa faahfaahinta daciifiyeyaasha tartanka tartanka iyo awoodaha si aad u qaadato tallaabooyin si waafaqsan dareenkaada caanka ah Source .